Vaovao - Ahoana no hividianana palitao
Amin'ny ankapobeny dia misy karazana akanjon'orana 4, samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany, izay azo vidiana arakaraka ny tena toetrany. Tandremo mba hanavahana na lamba fanodinana ny lamba orana. Ny fako namboarina dia misy fofona hafahafa, ny lakaoly sy ny lamba tsy manana tanjaka mitambatra, fotsy ny lakaoly, ary ho ketrona sy hikopaka mandritra ny fampiasana azy io.
Ny fiasan'ny akanjo ba mando dia tena manandanja ihany koa. Raha lehibe loatra ny halavan'ny akanjo lava, dia tsy mifanaraka ny haavon'ny stitch, tsy mifanaraka amin'ny fenitra ny famehezana, ary tsy raisina ny fitsaboana anti-leakage, dia mora tokoa ny mitsoka ao anaty orana.
Ny fomba fandroana orana amin'ny ankapobeny dia midika hoe akanjo lava lava iray, akanjo lava misaraka ary akanjo fandroana lamba (poncho), singa iray (lava) dia mora apetraka ary esorina nefa tsy mahalemy ny rano, ny karazany mizarazara dia tsy tanteraina kokoa, ny poncho dia mety amin'ny bisikilety bisikileta elektrika, bisikileta) Miandry).
4. Afaka miaina
Rehefa mividy palitao dia tsy maintsy dinihintsika feno ny fampiononana sy ny fisefoana. Raha miaro ny ranonorana fotsiny ny palitao, fa tsy afaka miaina, dia rehefa voaisy tombo-kase ny vatana hanarona ny vatan'olombelona, ​​dia tsy ho reraka ny hafanana ao amin'ny vatana, ary mangatsiaka ny ivelany ary mafana ny atiny, mamorona rano sy manangona. ny firakofana ny akanjo lava.
Tsy mitovy ny haben'ny orana, koa omena torohevitra ny mpanjifa hijery ny latabatra habe rehefa mividy akanjo mafana. Ny tsara indrindra dia ny manandrana azy ireo. Miezaha mividy lehibe kokoa mba hahafahan'izy ireo mampiasa na dia manao akanjo ririnina aza ianao.
Ny fitsipika fototra amin'ny famonoana ranonorana dia ny lamba + lamba. Ny karazana palitao mahazatra dia misy ny PVC (polyvinyl chloride), PU, ​​EVA, sns. Ny palitao dia mora manohina mivantana ny hoditra. Mba hisorohana ny fahasosorana amin'ny hoditra dia soso-kevitra ny palitao mifono eva.
Amin'izao fotoana izao, maro ny loko ny akanjo mando, ary miovaova ny fomba, ao anatin'izany ny fomba anglisy, ny fomba polka dot, ny loko matevina, ny loko, sns. Azonao atao ny mandinika ny fizotran'ny akanjo sy ny safidin'ny tena manokana rehefa mividy akanjo mafana.
Fotoana fandefasana: Dec-08-2020